Miidhamtoota qaamaa walqixa fayyadamaa taasisuuf
Miidhamtoota qaamaa walqixa fayyadamaa taasisuuf Featured
Waltajjii leenjii dhimma miidhamtoota qaamaa ogeessota miidiyaaf tibbbana qophaa'eerratti, namoota hirmaatan keessaa lama filachuun gaaffii walfakkaataa sadii gaafatamanii tilmaamaan waa'ee waliisaanii akka deebisan taasifame. Gaaffichis, halluu, bineensaafi akaakuu nyaata baay'ee jaallatan akka barreessaniidha. Haaluma kanaan namoonni lamaan gaaffiiwwan sadii gafataman keessaa inni tokko tokko; kan biraan ammoo lama deebii sirrii argate.
Gaaffiilee dhiyaatanii mukuu ba'innaaf nutti fakkaatee ture. Ergaasaa garuu miidiyaaleen dhimma miidhamtoota qaamaa wayita gabaasaan yookaan hawaasaaf odeeffannoo kennan guutummaatti yoo ta'uu baatellee, tilmaamaan akka ta'edha Yunivarsitii Finfinneetti Barsiisaa Fedhii Addaa Doktar Abbabaa Yewaalaawarqi kan dubbata.
Ogeessonni miidiyaa seerota, qajeelfamootafi waliigalteewwan akka idil-addunyaattis ta'e, akka biyyattiitti raggaasifaman irratti hundaa'uun odeeffannoo ga'aa ummataan kan ga'an muraasa. Kunimmoo dhimmoonni miidhamtoota qaamaa bal'inaan hawaasaafi mootummaa akkasumas dhaabbilee miti mootummaa biratti xiyyeeffannaa gahaa akka hinarganne taasiseera. Kun ammoo miidiyaaleefi miidhamtoonni qaamaa akka ija lamman ollaa walii ta'anii walarguu hindandeenyeeti. Kanaafuu walitti dhiyeenyaan hojjechuudhaaf hubannoon ogeessotaa miidiyaa dhimma miidhamtummaa qaaamaarratti cimuu akka qabu eeru Doktar Abbabaan.
Miidhamtummaan qaamaa kennaa yookaan carraa badaa umamaan namaaf kennamu utuu hintaane balaa namtolcheefi uumamaan yeroofi bakka kamitti iyyuu nama kamirrayyuu gahuu danda'uudha. Rakkoon keessumaa biyyoota guddataa jiran keessatti bal'inaan mul'ata.
Gabaasni Ministeeraa Barnootaa bara 2013/14 ba'e akka mul'isutti, miidhamtoota qaamaa umuriinsaanii barnootaaf ga'e keessaa %5 gaditu carraa barnootaa argatu. Kana jechuun miidhamtootaa qaamaa qaamaa Itoophiyaa keessa %17.6 jiru jedhamee tilmaamamu keessatti carraa barnootaa kan argatan baay'ee gadaanaa akka ta'e mul'isu.
Miidhamtoota qaamaa akka waan isaan dandeettii hinqabneetti ykn waa hojjechuu hindandeenyeetti ilaaluufi yaaduun sirrii miti kan jedhanDoktar Abarraan, hojjechuu danda'anis carraan hojii argachuunsaanii dhiphaadha. Dhaabbata tokkotu hojjetaa qacaruuf jecha beeksisaa baase. Beeksisichis ulaagaalee hunda tarreessuudhaan dhumarratti namni ulaagaa hundaa guutee qacaramu eeyyama konkolaachisummaa qabaachuu qaba jedha. Beeksisi kun carraa dorgommii miidhamaa qaamaa kan dhiphisu ta'uu himu.
Akka ragaaleen adda addaa mul'isanitti, Itoophiyaatti miidhamtoonni qaamaa hojjechuu danda'an %98 carraa hojii akka hinarganneedha. Kunis ilaalcha miidhamtoonni qaamaa hojjechuu hindanda'an kan jedhurraa madde.
Akka Doktar Abarraan jedhanitti, ogeessonni miidiyaa dhimma miidhamtummaa qaamaarratti adeemsa saayinsaawaafi ragaa qabatamaarratti hundaa'udhaan hojjechuu qabu. Kana malees, bu'uura seerota, qajeelfamootaafi waliigalteewwan dhimma miidhamtoota qaamaa ilaachisuun ba'an sirriitti hubachuun mirgoonni isaanii akka kabajamuufi hawaasa kaan faana walqaixa fayyadamummaasanii akka mirkanaa'uuf hojjechuu qabu.
Walumaagalatti, miidhamtummaan qaamaa, qaamaatu miidhamaa ta'e malee, fedhiifi ilaalchisaan hojiidhaaf qaban miidhamaa miti. Kanaaf ilaalcha dogoggoraa miidhamtummaa qaamaarratti jiru cabsuudhaan akkuma hawaasa kaanii fayyadamtoota akka ta'aniif hundinuu gumaachuu qaba.
Torban kana/This_Week 12413
Guyyaa mara/All_Days 1821833